आँखा चिलायो भन्दै अ स्पताल पु गेका व्य क्तिको आँ खामा जे भे टियो जसले डा क्टरनै च कित ! « गोर्खाली खबर डटकम
आँखा चिलायो भन्दै अ स्पताल पु गेका व्य क्तिको आँ खामा जे भे टियो जसले डा क्टरनै च कित !
एजेन्सी । सामाजिक संजाल साथै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा एक समाचार यति धेरै फैलियो की जसको का रण थाहा पाउँदा जो कोही है रान हुनेछन् । प्रा प्त जानकारी अनुसार त्यहाँ भएको के रहेछ भने । एक व्यक्ति आँ खा बे स्सरी चि लाएपछि अस्पताल पुग्छन् । आँखा चे क गर्न पुगेका बिरामीको जब डाक्टरले चे क गर्छन् त्यहाँ सबै झ स्किने अव स्था आउँछ ।
आँ खा चे क गर्दा जे देखियो डाक्टर नै च कित बने । त्यसपछि उक्त व्यक्तिको आँखाबाट जुका नि कालिएको थियो । आफ्नो आँखा चि लायो भन्दा अस्पताल पुगेका उनलाई चि कित्सकहरुले आँखामा जु का फे ला पारेका थिए। घ टना भारतको भएको बुझिएको छ। धेरै समय देखि आँखा दुख्ने र चिलाउने समस्याले ग्र सित उनी अ स्पताल पुगे पछि उनको आँखामा जु का परेको खु लासा भएको हो।पि डितको आँ खाबाट जु का निकाल्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सं जालमा भा इरलनै बनेको छ।
भिडियोमा चिकित्सक एक व्यक्ति आँखाको स र्जरी गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ।आँखाबाट चि कितासकले लगभग १५ से न्टिमिटर लामो जु का नि कालेको दृ श्य पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सर्जरिमा संलग्न चिकित्सकले बताए अनुसार समयमानै उक्त व्यक्तिको आँखाबाट जु का न निकालिएको भए पिडित व्य क्तिले केहि दिनमानै ज्यो ति गु माउने थिए।चि कित्सकहरुले आँ खाबाट जु का निकाल्न भन्दा पनि उ क्त जु कालाई आँखाबाट जी उँदै नि काल्नुलाई ठूलो चु नौतीको रु पमा लिएका थिए।
यदि जु काको आँखामै मृ त्यु भएको भए पि डित व्य क्तिको आँखामा अन्य इ न्फेक्सनको जोखिम पनि थियो।चि कित्सकहरुले गरेको सफल सर्ज री पछि पि डित व्य क्ति अहिले स्वस्थ रहेका छन्। यति धेरै लामो जु का आँ खाबाट नि कालिएको विश्वमा सम्भवत पहिलो घ टना भएको स र्जरिमा संलग्न चि कित्सकको भ नाइ रहेको छ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका भरतमणीलाई योगेश भट्टराईले दिए यस्तो ‘सरप्राइज’